'चलचित्रले मलाई बोकेन, मैले धान्नु पर्‍याे' (राजेश हमालसँगकाे अन्तर्वार्ता) - Himalkhabar.com
थप समाचारआइतबार, माघ १७, २०७२
‘चलचित्रले मलाई बोकेन, मैले धान्नु पर्‍याे’ (राजेश हमालसँगकाे अन्तर्वार्ता)
नेपाल चलचित्रका चर्चित अभिनेता राजेश हमाल नेपाली समाजमा शालीन, आत्मविश्वासी र बौद्धिक देखिन्छन् । फिल्म खेल्न थालेको २५ वर्षपछि उनको अनुहारकै भरमा फिल्म चल्न छाड्दै गर्दापनि उनी यही क्षेत्रमा नयाँ किसिमको भुमिका खोजिरहेका छन् । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नयाँ अनुहारका ‘हिरोहरु’को आगमन र फिल्मको शैली परिवर्तनबारे उनीसँग हिमाल खबरपत्रिकाका लागि डम्बरकृष्ण श्रेष्ठले गरेकाे कुराकानीः
तस्वीरहरु विक्रम राई
पछिल्लो फिल्म ‘वागमती’ किन चलेन ?
‘युगदेखि युगसम्म’ देखि ‘वागमती’ सम्म आइपुग्दा नेपाली समाजको भोगाइ, हेराइ, बुझाइमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । ‘वागमती’ मा धेरै मिहिनेत गरे पनि नयाँ स्वाद खोजिरहेका दर्शकले रुचाएनन् । यसको ‘कन्टेन्ट’ मै समस्या भयो ।
फिल्मी जीवनको २५ वर्ष सम्झिंदा कस्तो लाग्छ ?
सिनेमामा हिरोका रूपमा निरन्तर २५ वर्ष काम गर्न सक्नुलाई म आफ्नो सफलता ठान्छु । अभिनय थालेदेखि विश्राम लिएको छैन । एक साल त २२ वटा फिल्ममा काम गरें । शुरुमा कहाँसम्म पुग्छु, को जस्तो हुन्छु भनेर सोच्ने परिवेश थिएन । कुनै ‘रोल मोडल’ पनि थिएन । वर्षमा एक-दुई चलचित्र बन्थे । विस्तारै चलचित्र क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा जसो–तसो मेरो करिअर पनि अघि बढ्यो ।
थोरै तर राम्रा चलचित्रमा काम गर्नुपर्नेरहेछ जस्तो लाग्दैन ?
मैले काम थाल्दा चलचित्र नै बन्ला कि नबल्ला भन्नेमा टाउकोदुखाइ थियो । चलचित्र नै नबनिदिएको भए मेरो कलाकारिताको केही अर्थ हुन्नर्थ्यो । पहिलो चरणको जिम्मेवारी पनि थियो– जति चलचित्र बन्छन्, बनून् । धेरै चलचित्रमा काम गर्दा मसँगै अरुले पनि काम पाउँथे र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि सघाउ पुग्थ्यो । त्यो वेला क्यामरा म्यान, मेकअप म्यानहरू बम्बईबाट ल्याउनुपर्थ्याे ।
अहिले आफूलाई कुन ठाउँमा पाउनुहुन्छ ?
कलाकारले आफूलाई कहिल्यै एउटा परिधिमा बाँधेर राख्दैन । कलाकारलाई आकार दिने काम निर्देशक र दर्शकले गर्छ । यस अर्थमा, समाज अनुसारकै चलचित्र बन्छन् । मेरो दुर्भाग्य चाहिं के भइदियो भने, चलचित्रले मलाई होइन मैले चलचित्रलाई धान्नु पर्‍यो । म चाहन्छु– अब चलचित्रले मलाई बोकोस् । अहिले दर्शकलाई राजेश हमाल हेर्न सिनेमा हल पुगिरहनुपर्दैन । म टेलिभिजन कार्यक्रमदेखि अनलाइन मिडियासम्म देखिइरहेकै हुन्छु । अब चलचित्रको ‘कन्टेन्ट’ बलियो भयो भने मात्र दर्शकले मलाई हलमा समय दिन्छन् ।
मूलधारका भनिएका तपाईंका चलचित्र मल्टिप्लेक्समा नचल्नुको कारण ‘कन्टेन्ट’ मात्र हो ?
समाजमा भिन्दाभिन्दै दृष्टिकोण र स्वाद हुन्छ । फरक स्वाद चाहनेका लागि पनि फिल्म बन्नु राम्रो हो । फरक शैलीका नेपाली चलचित्र बनेर मल्टिप्लेक्समा हिन्दी मात्र हेर्न आउने दर्शकलाई आकर्षित गर्नु पनि राम्रो हो । तर, त्यस्ता फिल्म आम दर्शकलाई ‘बोरिङ’ पनि लाग्न सक्छ । सबैले ‘युनिभर्सल अपील’ भएका चलचित्र बनाउन सक्दैनन्, यो चुनौती छ ।
नेपाली निर्देशकहरू परिमार्जित नभएका हुन् ?
फिल्मको कन्टेन्टलाई मजबूत पार्ने जिम्मेवारी निर्देशककै हो । किनकि पर्दामा आउनुअघि नै उसको दिमागमा फिल्म तयार भइसकेको हुन्छ । कलाकार एउटा औजार मात्र हो । चलचित्र क्षेत्रले विश्वमा ठूलो फड्को मारेकाले हाम्रा निर्देशकहरूले आफूलाई अपडेट गराउनै पर्छ ।
तपाईंका सबै फिल्ममा एकै खालको अभिनय भयो भनिन्छ नि ?
मैले जति विविधता भएका भूमिका अरु कमै कलाकारले गरे होलान् । मैले ‘लभर ब्वाई’ र ‘एङ्ग्री यङमेन’ देखि ऐतिहासिक पात्रको भूमिका गरें । लुक्स र चरित्रमै फरक हुन त चलचित्रको धार अलग हुनुपर्‍यो । सरसर्ती हेर्दा ७०-८० को दशकका अमिताभ र राजेश खन्नाका फिल्ममा फरकपन देखिन्न, तर उनीहरूका आ–आफ्नै स्टाइल थिए ।
अब विश्राम लिने वेला भएको हो ?
कुनै पनि क्षेत्रमा २५-२६ वर्ष लागेपछि मान्छे अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ भने कुनै कलाकार अजम्बरी हुँदैन । तर, मैले अझै केही समय यो क्षेत्रबाट अलग्गिने सोच बनाएको छैन । कुनै कथाले तान्यो भने फिल्म निर्देशन पनि गर्ने विचारमा छु ।
तपाईंले फिल्म खेल्न थाल्दा जन्मेका र स्कूल पढिरहेकाहरू अहिले हिरो छन् । नयाँ पुस्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा अनौठो लाग्दैन ?
मेरो फिल्मी करिअर भन्दा कान्छो व्यक्तिहरूसँग आज तुलना हुन्छ भने त्यो मेरो सफलता हो । म यो चुनौती सामना गर्दै उनीहरूसँग काम गर्न रुचाउँछु, नयाँ कुरा दिन चाहन्छु । मैले हरेक तीन-चार वर्षमा यो आयो त्यो गयो भन्ने सुन्दै आएको छु । आउने र जानेबाट मलाई कुनै ‘थ्रेट’ पनि छैन, प्रतिस्पर्धा पनि छैन । धेरै उतारचढाव बेहोरे पनि मैले कहिल्यै प्रतिस्पर्धा महसूस गरिनँ । यद्यपि म सबै कुरामा ठीक छु भन्दिनँ ।
तपाईंले सौगात–दयाहाङसँग पनि एउटै फिल्ममा काम गर्नुभयो । नाटक पनि गर्नुभयो । नयाँहरूसँगको अनुभव कस्तो छ ?
उहाँहरूमा कलाकारिता, अभिनयप्रति बढी गाम्भीर्य देखेको छु । त्यसैले उहाँहरूका चलचित्रहरूले राम्रो छाप छाडिरहेका छन् । उहाँहरूमा फलानो हिरोको कपी गरेर ऊ जस्तै बन्ने चाह छैन । आफूभित्रको कलाकारिताको भोक मेटाउन लागिपरेको देखिन्छ । उहाँहरूसँग काम गरेको ‘मुखौटा’ मा मेरो सानो भूमिका थियो । दयाहाङ र मलाई नै केन्द्रमा राखेर कुनै फिल्म बन्यो भने पनि नगर्ने कुरै छैन ।
(नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नयाँ अनुहारका ‘हिरोहरु’को आगमन र फिल्मको शैली परिवर्तनबारेमा अावरण रिपाेर्टका लागि १७–२३ माघ २०७२ काे हिमाल खबरपत्रिका हेर्नुहाेला)